America Inoita Mangange 2-2 neSlovenia
Chikumi 18, 2010
Slovenia's Milivoje Novakovic, left, reacts as United States' Landon Donovan, top center, celebrates with United States' Oguchi Onyewu, second from right, and United States' Clint Dempsey, right, after scoring during the World Cup group C soccer match bet
Mumakwikwi e2010 FIFA World Cup, United States yaita mangange 2-2 ne Slovenia mumutambo wemu Group C. Chimwe chibodzwa chanwiswa neAmerica charambwa nemuridzi wepito, izvo zvarwadza vatsigiri vechikwata ichi.
Mumutambo wekutanga, America yakaita mangange ne England 1-1. Izvi zvinoreva kuti America yava nemapoinzi maviri kubva mumitambo miviri iyi. England ine poindi imwe chete. Slovenia ine mapoinzi mana pamitambo miviri. Mumutambo wekutanga, Slovenia yakakunda Algeria 1-0, iyo isati yava nepoindi imwe chete zvichitevera mangange ayaita neEngland.
Serbia yakunda Germany 1-0 mumutambo wemu Group D. Germany yava nemaponzi matatu kubva pamitambo miviri yayaita. Serbia yavawo nemapoinzi matatu zvichitevera kukunda kwayaita Germany. Serbia yakakundwa neGhana 1-0 mumutambo wekutanga. Izvi zvinorevawo kuti Ghana ine mapoinzi matatu, kubva pamutambo wayo mumwe chete. German neSerbia dzatamba mitambo miviri pari zvino. Germany yakakunda Australia 4-0 mumutambo wekutanga.
Nemugovera, Ghana iri kutamba neAustralia mumitambo yemuGroup D. Netherlands iri kutambwo neJapan muGroup E, ukuwo Cameroon iri kukweshana neDenmark muGroup E.
Mune imwe nyaya vatsigiri venhabvu vari muHarare vanoti vari kufadzwa ne mitambo yeWorld Cup. Mumwe mutsigiri wenhabvu, Tsitsi Kadzenga, anoti ari kutarisira Brazil kuva nyanzvi yemakwikwi aya.